China Net Furemu, Heterosexual Structure Kirasi fekitori uye vagadziri | Zhenyuan
Iwo ekutanga mayuniti eiyo grid furemu ari matatu mativi koni, mativi muviri, cube, truncated quadrangle uye zvichingodaro.Izvi zvinhu zvakakosha zvinogona kusanganiswa kuti zviite katatu, quadrilateral, hexagonal, circular, kana chero imwe fomu yechimiro cheplanar. zvakanakira nzvimbo yekumanikidza, kurema kurema, kuomarara kukuru, kuita kwakanaka kwekushoma, nezvimwewo.Inogona kushandiswa sedenga reimba yekurovedza muviri, yemitambo, yekuratidzira horo, imba yekumirira, nhandare yakamira awning, hangar yendege, maviri-nzira hombe yekoramu grid chimiro uye workshop nezvimwe zvivakwa.
Kirasi yekutanga inoumbwa nendege truss system, iyo inosanganisira mafomu mana, anoti, maviri-mafambiro orthogonally yakatwasuka yekuisa gridhi, maviri-mativi orthogonally akarerekera kuisa grid, maviri-mafambiro oblique achiisa gridhi uye matatu-mafambiro akatsamira kuisa grid.
Rudzi rwechipiri runoumbwa nequadrilateral piramidhi zvikamu. Kune mafomu mashanu: yakanaka quadrilateral grid, yakanaka quadrilateral grid, oblique quadrilateral grid, checkerboard quadrilateral grid uye nyeredzi quadrilateral grid.
Rudzi rwechitatu runoumbwa nehutatu hwepiramidhi zvikamu. Kune matatu matatu emhando yematatu epiramidhi mambure, yekuwedzera tricone mambure uye huchi tricone mambure. Zvinoenderana nechimiro cheganda repamusoro, dhizaini inogona kuganhurwa kuita cylindrical shell, idenderedzwa ganda uye hyperbolic parabolic shell. Zvinoenderana nezvinhu zvinoshandiswa muiyo grid chimiro , pane grid yesimbi, yakasimbiswa kongiri grid uye simbi uye yakasimbiswa kongiri yekomputa yemubatanidzwa, yeiyo simbi gridhi inoshandiswa zvakanyanya.
Kuongororwa kwesimba remukati reiyo gridhi:
Iyo grid dhizaini ndeye yakakwira odhi inoverengeka indeterminate mamiriro system.Mukuongorora kweplate-mhando truss, inowanzo fungidzirwa kuti majoini akasungirirwa, uye mutoro wekunze unoitwa pazvibatanidzwa zvinoenderana nesisitimu yakaenzana musimboti, inogona yakaverengerwa maererano nenzvimbo truss yekushandura nzira, inova iyo inogumira element nzira yeinosungirirwa tsvimbo system.Simplified nzira dzekuverenga, senge muchinjikwa danda system mutsauko ongororo nzira uye ndiro - senge nzira, inogona zvakare kushandiswa kuverenga emukati mauto uye kusuduruka. ye-single-layer shell truss inowanzo fungidzirwa kuomarara-yakabatana, iyo inofanirwa kuverengerwa zvinoenderana neyekugumira element nzira yeyakaomeswa-majoini system. Iyo mbiri goko grid inogona kuverengerwa neyakagumira element nzira yeinosungirirwa tsvimbo system. -shell nzira inogona zvakare kushandiswa kurerutsa kuverenga kweiyo imwechete-yakaturikidzana uye yakapetwa-marara shell grid zvivakwa.
Dhizaini dhizaini gridhi:
Chikamu chemuchinjikwa chechimiro chemukati chinofanirwa kutemerwa zvichienderana nekuverenga kwesimba uye kugadzikana.Kuti udzikise huremu hwakareba hwesimba rekumanikidza uye kuwedzera kugadzikana kwayo, zviyero zvakaita sekuwedzera redhiyo yekuparadzanisa uye yekutsigira bar inogona kutorwa. yeplate-yerudzi gridhi uye iyo mbiri-goko grid yakagadzirwa nesimbi kunyanya inosanganisira mafomu matatu: muchinjiko ndiro yakabatana, yakasunganidzwa hollow bhora mubatanidzwa uye bhaudhi bhora joint.The muchinjikwa ndiro yekubatana inokodzera truss chimiro chesimbi yesimbi. , uye tsvimbo uye ndiro yemubatanidzwa zvakabatana neyakagadzika kana yakakwira-simba mabhaudhi.Hollow bhora majoini uye bhaudhi bhora majoini akakodzera kune truss chimiro chesimbi pombi. Iwo majoini e-imwechete-dura goko grid dhizaini inokwanisa kukwanisa kumira kupfugama. mauto emukati. Pakati pese, iyo simbi yekudyiwa kwemajoini inoverengera ingangoita 15 ~ 20% yesimbi inoshandiswa mune yese chimiro cheiyo grid chimiro ....
Pasi peurongwa hweiyo mesh furemu
Floor chirongwa cheiyo grid
Grid node dhizaini dhizaini
Chirongwa chezasi chord yemambure furemu
3D node dhizaini dhizaini
Pashure: Kuvaka hurongwa hwemvura nemagetsi
Zvadaro: Kamudzira chimiro kirasi
Portal Chimiro Dhizaini
Space Furemu Dhizaini
Simbi Yakagadzirwa Dhizaini
Simbi Furemu Imba Dhizaini